Ngo-March 2014 kwenzeka esiteshini lokuqala kwesizini chungechunge, Starring abadlali owaziwa ngokwanele. "Igazi Bad" - iphrojekthi wakhe ubuhanjelwe uPawulu Priluchny, Ada Rogovtseva, Andrei Ilyin, u-Alexander Galibin nabanye abaningi. Yini yayizimisele icebo ifilimu futhi ezinye izenzakalo Amazing kwezinto eye yenzeka kusukela protagonists zalo?
"Igazi Bad": nabalingisi izindima. Maria kozakova njengoba Masha
Maria Kozakov - continuer yokusabela lwamakhosi eziningana. Impela ungudadewethu, indodakazi ka-Kirill Kazakov ( "I Countess de Monsoreau") futhi Aleny Yakovlevoy ( "Ngaphansi Isibonakaliso Bear Omkhulu"). Kokubili Umkhulu kaMariya - nabalingisi abadumile Soviet.
"Igazi Bad" - hhayi isiqephu sokuqala lapho uMariya wamukela indima isihloko. Waqala esebenza esemncane: Kozakov kungabonwa ku "Turkish Mashi" amabhayisikobho, "ithimba Lalo", "Ivan Podushkin". Ngokokuqala ngqá indima uhlamvu emaphakathi ochungechungeni waya Kozakova "Carmelita. Passion Gypsy ": Mary esiphathiswe ihlanganise umfanekiso hit lwamaGypsy. Khona-ke babe khona ifilimu "Duel", "Honey Love" futhi "Zonke lezinto eziligugu emhlabeni."
Esikhathini uchungechunge "Kubi Igazi" uhlamvu Kozakova futhi iqanjwe uMariya. Waya eMoscow ukuthola imfundo ephakeme, kodwa livela hhayi inkampani ezinhle, kanye nokudlwengula wakhe. Ngokushesha Maria uthola ukuthi ukhulelwe. Ibuyele edolobheni lakhe yesifundazwe, lapho isikhathi esithile kamuva ifunda ukuthi ingane yakhe umdlwenguli engekho kuyinto indlalifa umcebo omkhulu.
Paul Priluchny njengoba Ruslan
abadlali abasha "Kubi Igazi" chungechunge ziye usebonisile wodwa endle cinema. Ngokwesibonelo, uPawulu Priluchny iminyaka engu yakhe 30 wakwazi ukuthatha ingxenye amaphrojekthi amaningi adumile: "Ukuphila Adventures Mishka Jap", "Lavrov Indlela", "Kuvaliwe School", "indlela Freud sika", "umhlaba omnyama: Equilibrium".
Muva nje, umlingisi ukhetha ukudlala izinhlamvu ezimbi. Ngo "Igazi Emibi" wayevuka indima Ruslana Kostomarova - ngamanyala indodana kukasomabhizinisi. Ngolunye usuku ngo-unabangane Ruslan okudlwengula ayishaye up umlingiswa oyinhloko webhayisikobho ifilimu Masha. Base balahle amantombazane, ecabanga ukuthi ifile.
Lapho ubaba ethola mayelana Antics ka Ruslan, ubeka indodana yakhe eboshelwe endlini. Ngokushesha le nsizwa iya ku uhambo noyise, imoto yabo ingena engozini, futhi wonke umuntu okholwa Ruslan wafa. Kodwa empeleni nje walahlekelwa enkumbulweni yakhe. Ngokushesha Priluchny iqhawe ubuyela eMoscow ukuze ujoyine wokulwela ifa.
Roman Kurtsyn njengoba Sasha
Yini enye eyayihilelekile nabalingisi ifilimu? "Igazi Bad" waba njalo ekuskrini umsebenzi Roman Kuritsyna - owaphothula Yaroslavl Theatre Institute.
Roman yaqala ukuzenza umuntu ngo-2008, wathatha indima abaholayo ochungechungeni TV "Isiliva". Khona-ke le nsizwa esiphathiswe ukudlala nomsubathi Denisa Behtereva movie "Champion", futhi Starring uHelen Korikova, Oleg Shklovsky futhi Victor Dobronravov. Njengoba Roman Kurtsyn ngokuvamile ancike izindima okuholela movie.
Esikhathini ifilimu "Igazi Bad" Roman udlala Alexander - Man othandweni kanye noMariya. Masha kanye noSasha wazile nomunye kusukela esikoleni esiphakeme. Ngaphambi nje kokuba ama Ukuhamba zikaMariya eMoscow Sasha owenza intombi yakho. Lapho uMariya wabuya dolobha, omningi nobuhlobo babo iyashintsha: ngokuzumayo enqaba ukushada Alexander. Ukuze uthole umfana kuba nenhlekelele, uqala ukuphuza. Khona-ke ukushada udadewabo intombi yakhe.
Okunye abadlali. "Kubi Igazi": asekelayo izindima abadlali
Famous umlingisi Andrey Ilyin ( "Kamenskaya", "inhlokodolobha isono"), umbukiso odlala ummeli Kostomarov umndeni. Abadlali of the ifilimu "Igazi Bad" Alexander Galibin ( "Master noMargarita") futhi Anna Kazyuchits ( "UMfoweth of Brothers") ukudlala abazali Ruslana Kostomarova.
Olga Shuvalova ( "Boiling iphuzu") livela esibukweni esithombeni Alevtiny Bogatyrevoy - nomona udade protagonist. Vadim Dorofeev ( "Ndodakazi Yakuza sika") odlala UStepan Dorofeeva - omunye isoka Mashi Bogatyrevoy.
Abalingisi ukukhombisa "Igazi Bad" - lokhu Ada Rogovtseva ( "ukuzingela ngoba izinyamazane abomvu"), futhi Kirill Safonov ( "Pilot International Airlines") no-Aleksandru Ursulyak ( "" uMongameli "ehhotela). By the way, uyise ka-Aleksandru engumqondisi owaziwa Sergey Ursulyak, owaqondisa amafilimu ezifana "ngokumiswa" futhi "Isaev".
Futhi in the ifremu kungabonwa Farhad Makhmudov ( 'Taste of emhlophe "), uSergei Davydov (" Physics noma Chemistry "), uVladimir Sterzhakova (" Margot ") futhi Aleksandru Rovenskih (" Kubaba ").
Amanda Bynes: Filmography, biography kanye ukuphila komuntu actress
Ivan Flyagin: ukufaniswa kweqhawe kanye nezici zesithombe
Amagama athola amantombazane aqoqa abamba. Imishwana ye-Pick-up iyamangalisa. Imishwana ye-pick-up engcono kakhulu
Paris Syndrome: kungani lingumuzi uthando iba imbangela yokugula ngengqondo?
Kusukela lokho kuvikela omiyane inetha umnyango kuvulandi